WARAR CUSUB: Wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo wargaysyadu wixii ay ka qoreen | Gool FM	Wednesday, February 10th, 2016	Home
WARAR CUSUB: Wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo wargaysyadu wixii ay ka qoreen
Published on December 4, 2012 by Maxamed Xaaji
(Zurich) 04 Dis 2012 Waxaan halkan idiinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga iyo wargaysyada caalamku wixii ay ka qoreen.
Barcelona oo laacibiin ka doonaysa Dortmund Barca ayaa si dhow ula socota dhowr laacib oo ka tirsan kooxda Borussia Dortmund kuwaasoo ay ku jiraan Neven Subotic, Mats Hummels iyo Mario Gotze, waxayna filaysaa inay ugu midkood keeni karto gegada Camp Nou xagaaga soo aadan.
Tello oo qandaraaskiisa la gaarsiinayo illaa 2016
Barcelona iyo Cristian Tello ayaa lagu wadaa inay heshiis ku saabsan sidii loo kordhin lahaa qandaraaska xidig yarahan ay gaaraan todobaadyada soo aadan, kaasoo heshiiska dadabkan gaarsiin doona ilaa iyo sanadda 2016-ka.
Real Madrid oo durba doonaysa bedelka Mourinho
Real Madrid ayaa horraanba bilowday inay baadi doonto macalinkii u bedeli lahaa macalin Mou oo muran dhaliyay si uu Madrid uga tago waxayna bedel ahaan u bartilmaameedsanayaan macalimiin ay ka mid yihiin Joachim Low iyo Carlo Ancelotti.
PSG oo dalab u dirtay Beckham Kooxda Faransiiska ah ee PSG ayaa dalab rasmi ah u dirtay David Beckham oo ay doonayaan 6 bilood oo amaah ah iyagoo deetana heshiiska u kordhin doona hadii ay ka helaan hanaankiisa ciyaareed.
PSG oo ugaarsanaysa Hamsik
Leonardo ayaa Isniintii si gaar ah ula hadlay wakiilka Slovakian-kan oo lagu magacaabo Mino Raiola isagoo lasoo qaaday sidii Marek Hamsik lagu keeni lahaa Paris Saint-Germain dhamaadka xilli-ciyaareedkan.
Juventus oo doonaysa inay Verratti soo guryo-celiso
Horyaalka Serie A ayaa doonaysa inay Talyaaniga kusoo celiso muluqa kooxda PSG Marco Verratti oo kubad qaabeeye usoo baxaya Talyaaniga balse waa inay jeebabkeeda si qoto dheer gacanta u gelisaa maadaama uu xidigani ku kici doono 20 milyan oo euro waa hadiiba ay PSG la noqoto inay fasaxdee.
Sneijder oo ay doonayso Fenerbahce
Laacibka khadka dhexe ee Inter ayaa la sheegayaa inuu qarka u saaran yahay inuu heshiis qalinka kula aaso kooxda camaaliqada reer Turky ee Fenerbahce.
Manchester United ayaa lafteedu dib u bilowday qorshihii ay ku doonaysay laacibkan ka ciyaara lambarka buuxa ee 10-aad kadib markii uu shalay guuldarro iyo weji gabax ku dhamaaday gar lagu doonayay inay isku af gartaan maamulka Inter iyo wakiilka laacibkan oo aan la isku salaamin.
Bendtner oo Huntelaar u bedelaya kooxda Schalke
Arsenal ayaan qarsanin doonisteeda qanaaska Klaas-Jan Huntelaar bisha Janaayo, halka Juventus aysan sidaa ula dhacsanayn weerarka Nicklas Bendtner oo isla Gunners amaah uga soo maqan, waxayna Arsenal doonaysaa inay xidigan u isticmaasho qaab ay ku hesha ninkan Dutch-ka ah.
Wararka	Arsenal oo ku dhacday god ay u qoday hogaamiyayaasha Premier League ee Leicester City…(Sidee wax u dheceen?)
(London) 10 Feb 2016. Arsenal ayaa kala soo ...	NINKII ay difooseyaasha Chelsea cunsuriyadeeyeen oo sanad kaddib meeshii lagu tagooray yimi, PSG oo ku guuleystay talaabo ay Chelsea ku fashilantay bilowgii dhacdada iyo wax walba oo ku saabsan wararka soo kordhay….
(Manchester) 10 Feb 2016 – Sida wararku ay sheegayaan ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro